PSG Oo Man United U Soo Dhigtay Qorshe Halis Ah Oo Ay Ku Waayi Doonto Adeega Goolhaye David De Gea. - Gool24.Net
PSG Oo Man United U Soo Dhigtay Qorshe Halis Ah Oo Ay Ku Waayi Doonto Adeega Goolhaye David De Gea.
May 19, 2019 Mahamoud Batalaale
Maamulka kooxda PSG ayaa soo dhigay qorshe halis wayn ku ah Man United kaas oo ay la xidhiidha xaalada goolhaye David De Gea.
Man United ayaa ku fashilantay in ay David De Gea ku qanciso in uu mustaqbalkiisa u huro kooxdiisa Red Devils wuxuuna hadda galayaa sanadkii ugu danbeeyay qandaraaskiisa Old Trafford.
PSG ayaa doonaysa in ay David De Gea ku qanciso in uu soo dhamaysto heshiiska halka sano ee Man United uga hadhsan si uu xagaaga soo socda si xor ah ugu soo biiri karo Paris.
PSG oo markii hore la filayay in ay 60 milyan gini ku dalbanayso David De Gea ayaa ka cabsi qabta in ay dhibaato kala kulanto UEFA oo markii horeba ku haysatay sharciga dhaqaale wanaaga, waxayna hadda soo dhigtay qorshe United halis galin kara.
PSG ayaa David De Gea u balan qaatay mushaar 400,000 kun oo gini ah in uu todobaadkii kooxdeeda ka qaadan doono marka uu soo dhamaysto heshiiska halka sano ah ee Man United baaqiga ugu ah si uu bilaash ugu yimaado Paris.
Wargayska Express ayaa shaaciyay in PSG ayaa hadda doonayso sidii uu De Gea u sii joogi lahaa Man United sanadka ka hadhsan qandaraaskiisa si ayna wax lacag ah iibkiisa uga bixin oo uu si xor ah ugu soo biiri karo.
PSG ayaa doonaysa in David De Gea uu badal u noqdo Gianluigi Buffon iyo Alphonse Areola laakiin Man United ayaa hadda ku qasbanaan karta in ay talaabo deg deg ah qaado.
Goolhaye Gianluigi Buffon ayaa xili ciyaareedkan sabab buuxda u noqday in PSG ay guuldaro kala kulantay Man United oo ay Champions league kaga hadhay qaladaadkii uu Paris ku sameeyay ee ay PSG ku lumisay guushii 2-0 ka ahayd ee ay Old Trafford ku gaadheen.
Maamulka Man United ayaan haysan wax doorashooyin badan ah maadaama oo uu De Gea iska diiday in uu heshiis cusub saxiixo.
Man United ayaa hadda ku qasban in ay David De Gea u ogolaato dalabkiisii mushaarka qaaliga ahaa ee la sheegay in uu Old Trafford ku sii joogi karo iyo in ay kooxo kale xagaagan ka iibiyaan goolhayaha reer Spain.
David De Gea ayaa xili ciyaareedkiisii abid ugu xumaa ee Man United soo qaatay kadib markii uu qaladaad waali ah sameeyay wuxuuna ku dhamaystay 7 shabaq nadiif ah oo kaliya waana in ka yar goolhayaha kooxda heerka labaad u dhacday ee Cardiff City ee Neil Etheridge.
Si kastaba ha ahaatee, xaalada Man United ayaa noqotay laba daran mid dooro, iyada oo haddii ay De Gea heshis cusub la’aan ku sii haysato ay PSG si xor ah kula wareegi doonto sanad kadib ama waxay United ku qasbanaan doontaa in ay aqbasho wax walba oo uu De Gea doonayo.